WINDOWS 8 MAKA MMALITE - WINDOWS - 2019
Na isiokwu a, m ga-amalite ndu ma ọ bụ nkuzi na windo 8 maka ọtụtụ ndị ọrụ novice, na ihu kọmputa na sistemụ ahụ na nso nso a. Ihe dị ka 10 nkuzi ga-ekpuchi iji ojiji arụmọrụ ọhụrụ na nkà dị iche iche nke ịrụ ọrụ ya - na-arụ ọrụ na ngwa, ntinye mbụ, desktọọpụ, faịlụ, ụkpụrụ nke ọrụ nchekwa na kọmputa. Hụkwa: 6 aghụghọ ọhụrụ na Windows 8.1
Windows 8 - mara mbụ
Windows 8 - ụdị ọhụrụ a maara nke ọma sistemụ arụmọrụ site na Microsoft, emere ka ọ pụta ìhè n'ahịa na mba anyị na October 26, 2012. Na OS a, a na-egosipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmụgharị ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ya ndị gara aga. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ịwụnye Windows 8 ma ọ bụ ịzụta kọmputa na sistemụ arụmọrụ a, ị kwesịrị ịmara onwe gị na ihe dị ọhụrụ na ya.
Windows 8 sistemụ arụmọrụ bu ụzọ agafe na nsụgharị mbụ nke ị nwere ike mara:
Windows 7 (wepụtara na 2009)
Windows XP (nke a tọhapụrụ na 2001 wee ka arụ ọrụ na kọmputa)
Ọ bụ ezie na e mepụtara nsụgharị Windows ọ bụla nke mbụ maka iji na kọmpụta na laptọọpụ, Windows 8 dịkwa na mbipute maka iji na mbadamba - n'ihi nke a, a gbanwere interface nke sistemụ arụmọrụ maka iji ya mee ihe na ihuenyo mmetụ.
Usoro njikwa ejikwa ngwaọrụ na mmemme niile nke kọmputa. Enweghị usoro sistemụ, kọmputa, site na ọdịdị ya, na-abaghị uru.
Windows 8 nkuzi maka mmalite
Anya mbụ na Windows 8 (akụkụ 1, isiokwu a)
Mgbanwe na Windows 8 (akụkụ 2)
Mmalite (akụkụ 3)
Igbanwe nlele nke Windows 8 (akụkụ 4)
Ịwụnye ngwa si ụlọ ahịa (akụkụ 5)
Kedu ka Windows 8 si dị iche na nsụgharị ndị gara aga?
Na Windows 8, enwere ọtụtụ mgbanwe, ma obere ma dị ịrịba ama. Mgbanwe ndị a gụnyere:
Ntanetị ọhụụ ọhụrụ
Windows 8 mmalite ihuenyo (pịa ka enlarge)
Ihe mbụ ị hụrụ na Windows 8 bụ na ọ dị nnọọ iche karịa nsụgharị mbụ nke sistemụ arụmọrụ. Ejiri nyocha zuru oke na-agụnye: Malite ihuenyo, ndụ taịlị na arụ ọrụ.
Ihuenyo Mmalite (Ihuenyo Mmalite)
Ihuenyo dị na Windows 8 a na-akpọ mmalite ihuenyo ma ọ bụ ihuenyo mbụ, nke na-egosiputa ngwa gị n'ụdị taịlị. Ị nwere ike ịgbanwe nhazi nke mbụ ihuenyo, ya bụ atụmatụ agba, ọdịdị ndabere, yana ebe na nha nke taịl nile.
Ndụ taịl nile (taịl nile)
Ngwugwu Windows Windows
Ụfọdụ n'ime ngwa ndị dị na Windows 8 nwere ike iji taịlị dị ndụ iji gosipụta ụfọdụ ozi kpọmkwem na ihuenyo ụlọ, dịka ọmụmaatụ, ozi-e na-adịbeghị anya na ọnụ ọgụgụ ha, amụma ihu igwe, wdg. Ị nwekwara ike pịa bọtịnụ ahụ iji mepee ngwa ma hụ nkọwa zuru ezu.
Windows 8 Ọrụ Ọrụ (pịa iji gbasaa)
Njikwa na igodo na Windows 8 na-adabere na iji nkuku arụ ọrụ. Iji jiri ọrụ ọrụ, kwagharịa òké na nkuku ihuenyo, nke ga-emepe otu ma ọ bụ ọzọ panel nke ị nwere ike iji maka ụfọdụ omume. Dịka ọmụmaatụ, iji gbanwee gaa na ngwa ọzọ, ị nwere ike ịkwagharị pointer pouse na aka ekpe aka ekpe ma pịa ya na òké iji hụ ngwa ngwa na ịgbanwe n'etiti ha. Ọ bụrụ na ị na-eji mbadamba nkume, ị nwere ike swipe si n'aka ekpe gaa n'aka nri ka ịgbanwee n'etiti ha.
Ogwe osisi dị na Sidebar
Ogwe Ngalaba Na-ahụ Maka Obi (pịa iji gbasaa)
Amaghị m otú e si sụgharịa Ogwe Ngalaba Ebube na Russian, ya mere anyị ga-akpọ ya nanị n'akụkụ ọnụ, nke ọ bụ. Ọtụtụ n'ime ntọala na ọrụ nke kọmputa dị ugbu a n'akụkụ mpaghara a, nke ị nwere ike ịnweta site na ịmegharị òké na akuku elu ma ọ bụ ala aka nri.
Ọtụtụ ndị ugbu a na-echekwa faịlụ ha na ozi ndị ọzọ n'Ịntanet ma ọ bụ n'igwe ojii. Otu ụzọ isi mee nke a bụ ọrụ Microsoft SkyDrive. Windows 8 gụnyere atụmatụ maka iji SkyDrive, yana ọrụ netwọk ndị ọzọ dịka Facebook na Twitter.
Banyere akaụntụ Microsoft
Kama ịmepụta akaụntụ na kọmputa gị, ịnwere ike ịbanye na iji akaụntụ Microsoft n'efu. N'okwu a, ọ bụrụ na ị jiribu akaụntụ Microsoft na mbụ, faịlụ SkyDrive niile, kọntaktị na ozi ndị ọzọ ejikọtara ya na Windows 8. mbụ ihuenyo, ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị ọbụna na kọmputa Windows 8 ọzọ ma hụ ebe ahụ niile faịlụ gị dị mkpa na nhazi oge.
Ntinye ederede na Ngwa ndị mmadụ (Pịa ka ịbaa)
Ngwa ndị mmadụ na ihuenyo ihuenyo ga-enye gị ohere ịmekọrịta na Facebook, Skype (mgbe ị wụnye ngwa), Twitter, Gmail si Google na LinkedIn na akaụntụ. Ya mere, na ngwa ngwa ndị mmadụ na ntinye mmalite ị nwere ike ịhụ mmelite kachasị ọhụrụ site na ndị enyi gị na ndị ọkachamara (na ihe ọ bụla, maka Twitter na Facebook ọ na-arụ ọrụ, n'ihi na Vkontakte na Odnoklassniki esitelarị iche ngwa ndị na-egosiputa mmelite na taịl nile na ihuenyo mbụ).
Atụmatụ ndị ọzọ nke Windows 8
Desktọọpụ simplified maka arụmọrụ ka mma
Windows 8 desktọọpụ (pịa iji gbasaa)
Microsoft anaghị ehichapụ desktọọpụ ahụ, ya mere enwere ike iji ya iji jikwaa faịlụ, nchekwa, na mmemme. Otú ọ dị, e wepụrụ ọtụtụ ihe dị iche iche, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke kọmputa na Windows 7 na Vista na-arụkarị ọrụ nwayọ. Ntọala emetụtara na-arụ ọrụ ngwa ngwa ọbụna na kọmputa ndị na-adịghị ike.
Enweghị bọtịnụ mmalite
Mgbanwe kachasị mkpa na-emetụta sistemụ arụmọrụ Windows 8 - enweghi mmalite bọtịnụ mmalite. Na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọrụ niile a na-akpọ site na bọtịnụ a ka dị site na ihuenyo ụlọ na panel, maka ọtụtụ ndị, enweghị ya na-akpata iwe. Eleghị anya n'ihi nke a, mmemme dịgasị iche iji weghachite bọtịnụ Malite na-ewu ewu. M na-eji nke a.
Antivirus Windows 8 Defender (pịa ka enlarge)
Windows 8 nwere onwe ya na Windows Defender antivirus, nke na - enye gị ohere ichebe kọmputa gị site na nje, trojans na spyware. Ekwesịrị ịdeba na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ n'eziokwu, antivirus Microsoft mkpa dị mkpa n'ime Windows 8. Ịma ọkwa nke ihe omume dị ize ndụ na-egosi nanị mgbe ịchọrọ ya, na ntanetịime nje na-emelite kwa mgbe. N'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ na antivirus ọzọ dị na Windows 8 adịghị mkpa.
Ekwesịrị m ịwụnye Windows 8
Dịka ị pụrụ ịhụ, Windows 8 emeela mgbanwe dị ukwuu ma e jiri ya tụnyere nsụgharị Windows nke mbụ. N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị na-azọrọ na nke a bụ otu Windows 7, anaghị m ekweta - nke a bụ usoro dịgasị iche iche nke sistemụ, dị iche site na Windows 7 ruo n'ókè nke na nke a dị iche na Vista. N'ọnọdụ ọ bụla, mmadụ ga-ahọrọ ịnọ na Windows 7, onye nwere ike ịchọọ OS ọhụrụ. Onye ga - enweta kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ya na Windows 8.
Akụkụ nke ọzọ na-elekwasị anya na ịwụnye Windows 8, ngwaike ngwaike na nsụgharị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ a.